America Yatarisana neDambudziko reKushaiwa Vashandi
Gumiguru 26, 2021
Vashandi mufakitori mudunhu rePennsylvania
Makambani mazhinji muAmerica anoti ari kunetseka kuwana vashandi apo mabasa mazhinj ave kubuda zuva nezuva.
Pakatanga chirwere cheCovid-19, vanhu vakakurudzirwa kugara mudzimba dzavo izvo zvakakonzera kuti makambani mazhinji avharwe senzira yekurwisana nekupararira kwe chirwere ichi.
Panguva iyi, hurumende yakatanga kupa zvizvarwa zveAmerica mari yekubatsirika.
Izvi zvakashorwa zvikuru nevebato rinopikisa, reRepublican Party, vachiti izvi zvichakonzera kuti vanhu vasada kuenda kumabasa sezvo vanhu vakange vava kuwana mari zhinji vagere kudzimba dzavo pane yavainowana kubasa.
Dzimwe mari dzekubatsira idzi, dzichiri kupiwa kune vamwe vanhu nazvino. Nyanzvi dzezvemabasa nezvemabhizimisi dzaitaura kuti pamozarurwa mabhizimisi mazhinji, pachaita vashandi vakawanda asi mabasa ari mashoma.
Ikozvino matunhu mazhinji akaregera kubatsira vanhu nemari dzavaipiwa mazuva akatanga kupararira Coronavirus.
Makambani mazhinji arikuvhurwa zvakare uye mabasa mazhinji arikumuka zuva nezuva asi vanhu vanotsvaka kana kutora mabasa aya vashoma.
Nyanzvi mune zvemabhizimisi, vachidzidzisa paDevry University, Muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti vanhu vajaira kushanda vari kumba, naizvozvo havachafariri mabasa avanoita kunze kwedzimba dzavo, vachiti vanhu vachirikutyavo chirwere cheCovid-19 icho chichiri kunetsa pasi pose.
Muzvinafundo Masocha vanoti sekukwezva vashandi, makambani mazhinji ava kuwedzera mari yemihoro yevashandi vawo nekuvapa zvimwe zvisiri mari, zvakaita sekuvabhadharira mari dzechikoro, zvikwereti zvekutenga motikari nezvimwe asi mabasa ari kubuda ari kushaya vazhinji vari kuatora.
Ndira 06, 2022
VaBiden Voshora VaTrump neKukonzera Kusagadzikana muAmerica neKuramba Kutambira Zvakabuda Musarudzo yeMutungamiri weAmerica
America yasvitsa neChina gore rimwe chete kubva zvakaitika mhirizhonga inotyisa padare reCongress muWashington DC vatsigiri vevaive mutungamiri wenyika, VaDonald Trump, vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zvichitevera kukunda kwakaita VaJoe Biden vebato remaDemocrats.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti chiitiko ichi chakasiyana America isisina chiremera pasi rose panyaya dzekugamuchidzana masimba murunyararo uye hutongo hwejekerere.
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden nemutevedzeri wavo, Amai Kamala Harris, vange vari mudare reparamende reUS Capitol muWashington DC vachishora zvikuru zvakaitika musi wa 6 Ndira Izvi. VaBiden vati zvakaitika zvakadzosera kumashure hutongo hwejechetere.
Amai Harris vatiwo zvakaitika musi uyu zvinoratidza kuti hutongo hwejekerere hunofanira kubatwa sezai sezvo huchigona kupwa sedova.
VaTrump vainge vambovimbisa kupawo divi ravo kumba kwavo kuMar-a-Lago, Florida, asi havana kuzoita izvi asi vachiri kungoramba havo kutambira zvakabuda musarudzo.
Dunhu rakanetsawo rairamba kutambirwa naVaTrump zvakabuda musarudzo dzaro ndere Pennsylvania uko kwakaberekerwa VaBiden.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu iri, VaNicholas Mada, avo vanoona nezvekurongwa kwemisangano mubato reMDC Alliance muno muAmerica, vati vari kufara kuti zvaida kuitwa naVaTrump zvekuti sarudzo dzemudunhu iri dzisatambirwe, zvakakona n’anga murapwa achida.
Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mubato reZanu-PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanoti zvakaitika muAmerica zvinonyadzisa uye nyika iyi haifanire kuda kuzviita muzivi wezvose panyaya yehutongi hwejekerere.
Asi vachipawo pfungwa dzavo, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZImrights, VaDzikamai Bere, vanoti zvakaitika muAmerica zvakaratidzawo chimwe chinhu chikuru chekuti mutungamiri wenyika haasi pamusoro pemutemo.
Vanhu vatanhatu kusanganisira mumwe mupurisa vakafa nezvikonzero zvakasiyana siyana mumhirizhonga iyi.
Vamwe vanhu vanosvika mazana manomwe vakaendeswa kumatare mushure mekunge vabatwa nematikitivha eFBI ayo ari kuferefeta nyaya iyi.
Muchuchusi mukuru wehurumende yeAmerica, VaMerrick Garland, vanoti vari kuzoita zvose zvavanokwanisa kuti vose vane chekuita nemhirizhonga iyi vamiswa pamberi pematare edzimhosva.
Dare reHouse of Representatives rakaumbawo komiti ine nhengo kubva kumapato ose ari mudare iri kuti iferefetewo zvakaitika kusanganisira zvakaitwa naVaTrump pamwe nezvavasina kuita zvavaitarisirwa kuita semutungamiri wenyika panguva iyi.
Vane ruzivo nezvenhoroondo yeAmerica vanoti mhirizhonga yakaitwa nevatsigiri vaVaTrump yakapedzisira kuonekwa makore mazana maviri nemasere adarika apo musi wa 24 Chikumi 1814 munguva yehondo pakati peBritain neAmerica, mauto eBritain akapinda muWashington DC ndokupisa dare reUS Capitol uye muzinda wemutungamiri wenyika nezvimwe zvivakwa.
Ndira 03, 2022
Chando neCovid-19 Zvokonzera Kukanzurwa kweZviuru neZviuru zveNzendo dzeNdege
Kusvika masikati ane zuro, Svondo, nzendo dzaifanirwa kuitwa nendege dzinoita zviuru zviviri nemazana matatu (2,300) dzakanga dzakanzurwa nepamusana pechando chakawandisa, kutonhora uye nedenda reCovid-19.
Nemusi weMugovera, nzendo dzengege dzinoita zviuru zviviri nemazana manomwe (2,700) dzakakanzurwa muAmerica uye nzendo dzinoita zviuru zvina nemazana manomwe (4,700) dzakakanzurwa pasi pose.
Matunhu mazhinji ari pakati peAmerica akatarisana nechando chakaipisisa chiri kutadzisa mabasa mazhinji kuti aitwe, kusanganisira kufamba kwendege. Izvi zvakakonzera kuti zviuru nezviuru zvendege dzisabvumidzwa kubhururuka.
Ukuvo denda reCovid-19 rakavhiringa vashandi vazhinji vanoshanda mundege zvokuti vashandirwi vakatanga kukurudzira vashandi kuti vashande maawa mazhinji kusvika mwedzi unouya vachitambiriswa mari yakapetwa katatu pane yavanositambira.
Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDevry University, Muzvinafundo Elliot Masocha, vanoti kunaya kwechando nekupararira kwedenda reCovid-19 hazvisi kukanganisa mafambiro evanhu chete asi kuti zviri kukanganisa zvemabhizimisi nezvehupfumi hwenyika izvo zvichiri kuremerwa nekubuda mudambudziko rekumbovhara kwemwedzi mizhinji, zvakakonzerawo kuvharwa kwemabhizimisi mazhinji.
Zvita 27, 2021
VaJoe Biden Vanoti Varwadziwa Zvikuru neRufu rwa Archbishop Desmond Tutu
Mutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, nemudzimai wavo, Amai Jill Biden, vanoti varwadziwa zvikuru kunzwa nezvekufa kwaArchbishop Desmond Tutu, vachiti mufi ange akazvipira mukunamata uye aine chido chekuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe.
VaBiden vati vakaropafadzwa zvikuru mukuwana nguva yekuzivana naVaTutu kwemakore akawanda, vachiti kuzvipira kwavo nehushingi hwavo mukurwira kodzero dzevanhu kwakakurudzira America kuti ivandudze maonero ayaiita hurumende yerusaruraganda, kana kuti Apartheid, muSouth Africa.
Archibishop Tutu vakashaya nemusi weSvondo vava nemakore makumi mapfumbamwe.
Baba naAmai Biden vati vakafara zvikuru pakushanyira VaTutu panguva yeWorld Cup yegore ra2010, vachitizve mwedzi mishoma yapfuura, vakabatana nedzimwe nyika mukupemberera kusvitsa kwaVaTutu makore makumi mapfumbamwe.
Munyori mukuru musangano remakereke, reZimbabwe Council of Churches, Reverend Doctor Kenneth Mtata, vanoti vafundisi vazhinji vanokurudzirwa nemabasa aVaTutu zvekuti vazhinji mukati mavo vari kushanda nesimba vachitevedzera mabasa aVaTutu.
Zvita 22, 2021
Chizvarwa cheZimbabwe Chobatsira Vanoda Kudzidza muAmerica
Amai Alletha Mujeyi Muzorewa
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica Amai Alletha Mujeyi-Muzorewa chiri kukuridzira vabereki kuti vasatyire kure kutsvaga nzira dzekuti vakwanise kutumira vana vavo kuzvikoro zvepamusoro zvemu America.
Vanoti kune mari dzekubatsira kana kuti mascholaships akawanda avanokwanisa kuwana kuti vaite zvidzidzo zvavo. Vaenderera mberi vachiti vamwe vanokwanisa kudzidza vari muZimbabwe asi vachishandisa dandemutande kuita zvidzidzo zvavo.
Amai Mujeyi Muzorewa vanoti vari kushanda zvakare nevamwe vekune dzimwe nyika dzemuAfrica kusanganisira vachivapa dzidziso yekuti vangawane sei mari dzedzidzo pazvirongwa zvavanoita pamadandemutande akaita seZoom, paFacebook neWhatsApp.
"Shuwiro yangu ndeyekuti veruzhinji munyika vazive nzira dzakasiyana siyana dzekuwana dzidzo mungave muAmerica kana kuzvikoro zviri muAmerica vachisandisa dandemutande," Amai Mujeyi Muzorewa vaudza Studio7.
Hurukuro naAmai Alletha Mujeyi Muzorewa
Zvita 09, 2021
VaBiden Voparura Nhasi Musangano weHutongo Hwejekerere Pasi Rose
Musangano wehutongo hwejekerere wakakokerwa nemutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, unotanga nhasi, China, padandemutande nenguva dz 3 masikati (3pm).
Musangano uyu unonzi uchaitwa kubva musi weChina 9 Zvita kusvika musi wa 10 Zvita uye uchange uchitarisa zvinokanganisa hutongo wejekerere, uchipawo mukana kuvatungamiri vedzimwe nyika kuti vabude pachena vachitaridza kuzvipira kwavo mukusimudzira hutongi hwejekerere.
Musangano uyu unobva pachido chaVaBiden chekukurudzira nyika dzepasi pose kuti dzisimbise hutongi hwejekerere, uho vamwe vanoti hwakadzikira pasi rose kusanganisira muAmerica zvichitevera hutongi hwevaimbova mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump.
Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, reState Department, rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti zvinhu zvikuru zvinodiwa zvinosanganisa kudzivirira hutongi hwehumbimbindoga, kurwisa huori nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
Zimbabwe haina kukokwa kumusangano uyu asi dzimwe nyika dzemuAfrica dzakakokwa kumusangano uyu dzinosanganisa Angola, Botswana, DR Congo, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Namibia, South Africa neZambia.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, vachidzidzisa paWellesley College, mudunhu reMassachusetts, Muzvinafundo Chipo Dendere, vaudza Studio 7 kuti musanagano uyu ndewekutanga uye uchange uchitora nzvimbo muna Ndira gore roga roga.
Vanoti iyi inzira yaVaBiden yekukurudzira nekubatsira nyika dziri kuedza kutevera gwara rehutongi hwejekere pasi pose.